Iindawo ezi-5 zokufumana i-microwave ekhitshini | IBezzia
Iindawo ezi-5 zokufumana i-microwave ekhitshini
I-microwave yinto ekufuneka uyisebenzisile ekhitshini. Abo bethu babesebenzisa ukufudumeza ukutya kwiminyaka embalwa edlulileyo, namhlanje siyasisebenzisa ukupheka iiresiphi ezinje ukugcinwa ngokukhawuleza esabelana ngayo kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Kuyimfuneko ukuyenzela indawo ekhitshini, kodwa phi?
Kukho iindawo ezahlukeneyo ekhitshini apho singabeka khona imicrowave. Okuqhelekileyo kukuthi yibeke kwikholamu ecaleni kwe-oveni, kodwa kuxhomekeke kubungakanani bekhitshi kunye nokusasazwa kwayo, oku akunakuba lukhetho okanye kungangabi kokona kulungileyo. Kungenxa yoko le nto sifuna ukukubonisa ezinye izimvo namhlanje, ukuze ube nalo lonke ulwazi ngaphambi kokujongana nohlaziyo oluzayo.
1 Kwikholamu okanye ngokuhambelana ne-oveni
2 Kwigunjana elide
3 Njengengxenye 'yesikhululo sekhofi'
4 Kwi siqithi okanye usingasiqithi
Kwikholamu okanye ngokuhambelana ne-oveni
Ukubeka i-oveni kunye ne-microwave kwikholamu yenye yezona zikhetho zithandwayo. Enye yezona zinto zisebenzisekayo, kuba zombini izixhobo zombane zikubude obutofotofo ukuba wonke umntu angazisebenzisa. Eyona nto ifanelekileyo kula matyala kukuba zombini izixhobo zilandela umgca wokuyila ofanayo kwaye ukugqitywa okufanayo kuyahambelana neekhabhathi.
Ukuba ikhitshi lakho likhulu ngokwaneleyo, ungaluphucula olu lungelelwaniso lwekholamu. Njani? Ukubeka i-oveni kunye nemicrowave ngokudibeneyo, ukuze nganye nganye ihlale kwikholamu yeekhabhathi. Libala ngokugoba okanye ukuma ngeenyawo ukuze ubone okanye ufake izinto ngaphakathi.
Ukubeka i-microwave kwikhabhinethi ende ayisiyonto intle kakhulu; Abo bethu abade kakhulu banokuba nobunzima ekusebenzeni kubude obunamanzi. Nangona kunjalo, xa esi sixhobo kunqabile ukuba sisetyenziswe okanye ukhetha ukubeka phambili ezinye iimfuno ekhitshini, oku kunokuba sisisombululo esihle.
Usebenzisela ntoni imicrowave? Ukuba uyayisebenzisa ukufudumeza ubisi kwisidlo sakusasa, ikakhulu, lubeke kufutshane nefriji iya kuba luncedo kuwe. Ukuba uyisebenzisa yonke imihla ukulungiselela isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa, kuya kufuneka ufumane indawo phakathi kwefriji kunye nesitovu.
Njengengxenye 'yesikhululo sekhofi'
Yintoni isikhululo seKofu? Isithuba apho unokufumana yonke into oyifunayo ukulungiselela ikofu: umenzi wekofu, iikomityi, iswekile ... Ziqhelekile iikhabhathi ezineminyango evumela ukufihla imixholo yekhabethe okanye ukuyishiya ujonge umbulelo kwiinkqubo zeengcango ezifihliweyo okanye ezisongekileyo.
Olu hlobo lwe-wardrobe luhlala lukhona kwikhawuntara yasekhitshini kwaye ayihlali ineeshelfu ezingaphezulu kwesithathu. Ukongeza kwizinto eziyimfuneko ukulungiselela ikofu, ungagcina kule bhokisi yentsimbi kunye neelekese zakho ozithandayo okanye izilayi zesonka ukuze uzenzele iiglasi ezimnandi.
Kwi siqithi okanye usingasiqithi
Ukuba unekhitshi elivulekileyo kwigumbi lokuhlala, ungabeka i-microwave kwesi siqithi okanye usingasiqithi odibanisa zombini izithuba, phambi komlilo, ukuze abantu ababini abohlukeneyo basebenzise enye nenye ngaphandle kokungena endleleni. Ngaba kukhululekile ukuba nabo kule ndawo iphakamileyo? Ekuphela kwendlela yokuphepha ukugoba kukubheja kwi idrowave microwave, i-microwave yokulayisha ephezulu. Uyayibetha? Zimbalwa iibrand ezisebenza nabo nokuba zibiza ntoni.
Ngaba awuyifumani indawo kwimicrowave yakho ekhitshini? Ngaba awurhaleli ukwenza uhlengahlengiso olukhulu ukuze ufumane indawo yalo? Ungayibeka phezu komphezulu wetafile. Ukuba unayo isithuba setafile Esi sisisombululo esihle sokufumana i-microwave ekhitshini.
Yibeke kwimilenze ephakamisa kancinci ukuvumela ubushushu bunyamalale kwaye fumana ishelufu yenzelwe ukuthatha ithuba lesithuba kwezi. Ungabeka ezinye izixhobo ezincinanana okanye izixhobo ngaphezulu ofuna ukubanazo ngaphambili kwaye ebehlala kuloo ndawo yokuphambana.
Zininzi iindawo zokufumana i-microwave ekhitshini. Eyona nto intofontofo, ngaphandle kwamathandabuzo, kukuba ikubude obutofotofo, kwinqanaba lemehlo ukunciphisa ingozi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ukupheka » Iindawo ezi-5 zokufumana i-microwave ekhitshini
'IHache' iza kwiNetflix kunye nexesha layo lesibini
Ukugcina ngokukhawuleza imicrowave